ဤသည်မှာ Qualcomm Quick Charge 2.0 စနစ်သည်အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်သည် Androidsis
သင့်ဖုန်းကိုအားသွင်းမည့်အချိန်သိပ်မကြာခင်ကတိပေးထားသော Quick Charge 2.0 နည်းပညာသည်သင်၏စမတ်ဖုန်း၏ဘက်ထရီကိုလျင်မြန်စွာအားဖြည့်သည့်စနစ်အကြောင်းသင်ပြောပြီးပြီဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ပရိုဆက်ဆာထုတ်လုပ်သူကပဲထုတ်လိုက်တယ် Quick Charge 2.0 စနစ်ကိုပြသသောဗွီဒီယို။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ သုံး Nexus6ကိုအသုံးပြုကြသည်။ လက်ဝဲဘက်ရှိသမားရိုးကျ5Volt / 1 Amp charger ကိုအသုံးပြုသည်။ Nexus တွင်5Volt /2Amp charger ကိုအသုံးပြုထားသည်။ တတိယမြောက် Nexus မှာ Qualcomm ၏ Quick Charge 2.0 နည်းပညာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သင်အမှန်တကယ်ခြားနားချက်ကိုပြောပြနိုင်ပါသလား? ဟုတ်ကဲ့၊
ဗီဒီယိုတစ်ခုတွင် Qualcomm ၏ Quick Charge 2.0 နည်းပညာမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပြသည်
ဒီဗီဒီယိုမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း San Diego အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်သူရဲ့အမြန်အားသွင်းနည်းကိုအသုံးပြုထားတဲ့ Nexus6မိနစ် ၄၀ အတွင်းမှာ ၅၀% အထိအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။2amps ပါသည့် charger သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းသို့ရောက်ရှိပြီး ၁ amp charger သည် Nexus 32 အား ၂၂% ဖြင့်ပြန်လည်အားသွင်းပေးသည်။
ဒါဟာနည်းပညာရှင်းပါတယ် Qualcomm ၏ Quick Charge 2.0 သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်လိုအပ်တဲ့ဝန်နှင့်လိုက်ဖက်တဲ့ device ကိုထောကျပံ့ဖို့လုံလောက်တဲ့အစွမ်းထက် charger ကိုလိုအပ်ပါတယ်။
Qualcomm မှလျင်မြန်စွာအားသွင်း 2.0 နည်းပညာ eဒါဟာထုတ်လုပ်သူအချို့ပရိုဆက်ဆာများတွင်ပေါင်းစည်းထားသည် သငျသညျသဟဇာတ terminal ကိုရှိပါကဒါကြောင့်သင်က၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်အများဆုံးအသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် charger ကို Motorola တာဘိုအားသွင်းစက် သင်၏ Qualcomm Quick Charge 2.0 နှင့်လိုက်ဖက်သောကိရိယာကို ၈ နာရီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အတွက် ၁၅ မိနစ်အားသွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဤနည်းပညာကိုယနေ့စမ်းသပ်ရန်စိတ်ဝင်စားပါက hQualcomm Quick Charge 13 နှင့်လိုက်ဖက်သော Android ဖုန်း ၁၃ လုံးရှိသည်။ Motorola DROID Turbo၊ Nexus 6၊ Samsung Galaxy Note Edge၊ Samsung Galaxy Note 4၊ HTC Desire၊ ဒုတိယမျိုးဆက် Motorola Moto X၊ Sony Xperia Tablet Z3 Compact၊ Sony Xperia Z3၊ Sony Xperia Z3၊ HTC One (M8), Sony Xperia Tablet Z2 နှင့် HTC One Remix ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ဒါက Qualcomm Quick Charge 2.0 စနစ်အလုပ်လုပ်ပုံပါ
Xiaomi မှတ်စု ?? တဖန်မကြာမီမှတ်စုလိုလားသူအဘယ်သူမျှမ?
omar ကျူးဘား ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင်သဟဇာတဖြစ်သော z3 ပုံရှိသော်လည်းတစ်စုံတစ် ဦး ကတကယ်အလုပ်လုပ်သည်ဆိုပါက၎င်းသည်ပုံမှန်အားသွင်းချိန်နှင့် ၃ နာရီကြာသည့်အချိန်ထိမည်မျှကြာသည်ကိုသင်အကြံပြုလိုပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
omar cuba သို့ပြန်သွားပါ